Na mmepe nke oge, iji mezuo ihe ndị achọrọ maka ịnọ na nchekwa, ọzọ na-azọpụta ike, na -ebelata mkpọtụ, na mbenata ikuku nsị, na usoro ọgwụgwọ elu, mkpuchi plastik aghọọla ihe ọhụrụ na nchekwa gburugburu ebe obibi..adịghị ka electroplating nkịtị, oghere electroplating bụ enyi na gburugburu ebe obibi. N'otu oge ahụ, oghere electroplating nwere ike mepụta mmetụta ojii na ezigbo gloss nke enweghị ike ịnweta site na electroplating nkịtị..
Vacuum electroplating bụ ihe mgbakwasị ụkwụ anụ ahụ, nke a na -etinye gas argon n'okpuru oghere, na gas argon na -akụ ihe, na ngwongwo na -adọkpụ na -ekewapụta mkpụrụ ndụ ihe dị iche iche nke ihe lekwasịrị anya ka ọ bụrụ akwa dị larịị., ihe a na -atụ anya dị ezigbo mkpa, yabụ kedu ngwa nke ihe elekwasịrị anya na usoro electroplating agụụ??Taa, onye nchịkọta akụkọ ga -enye gị nkọwa zuru ezu.
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, itinye ihe ndị elekwasịrị anya na oghere elektrọnik nwere njirimara ndị a:
(1) Ọla, Enwere ike ịme alloys ma ọ bụ insulators ka ọ bụrụ ihe nkiri dị mkpa.
(2) N'okpuru ọnọdụ ọnọdụ kwesịrị ekwesị, enwere ike ịme ihe nkiri dị gịrịgịrị nke otu mejupụtara site na ọtụtụ ebumnuche na mgbagwoju anya.
(3) Site n'ịgbakwunye oxygen ma ọ bụ gas ndị ọzọ na -arụ ọrụ na ikuku ikuku, enwere ike ịme ngwakọta ma ọ bụ ngwakọta nke ihe elekwasịrị anya na molecule gas.
(4) Enwere ike ịchịkwa ntinye eburu n'uche ugbu a na oge ịgbasa, ọ dịkwa mfe ịnweta ọkpụrụkpụ ihe nkiri dị elu.
(5) E jiri ya tụnyere usoro ndị ọzọ, ọ na-aka mma maka imepụta ihe nkiri sinima nke nwere nnukwu mpaghara.
(6) Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ike ndọda adịghị emetụta ahụ ahụ, na enwere ike ịhazi ọnọdụ nke ebumnuche na mkpụrụ.
(7) Ike nrapado n'etiti mkpụrụ na ihe nkiri karịrị 10 oge nke ihe nkiri mkpuchi vapor izugbe, na n'ihi na ụmụ irighiri akwara na -ebu nnukwu ume, ha ga -aga n'ihu na -ekesa n'elu ihe nkiri na -akpụpụta elu ka ha nweta ihe nkiri siri ike ma sie ike. N'otu oge ahụ, ike dị elu na -eme ka mkpụrụ ahụ dị naanị mkpa kristal kristal nwere ike nweta ya na obere okpomọkụ.
(8) Nnukwu njupụta dị elu na ọkwa izizi nke ihe nkiri, nke nwere ike mepụta ihe nkiri na-aga n'ihu nke dị n'okpuru 10nm.
(9) Ihe a na -atụ anya nwere ogologo ndụ ma enwere ike mepụta ya na -akpaghị aka ma na -aga n'ihu ogologo oge.
(10) Enwere ike ịme ihe elekwasịrị anya n'ụdị dị iche iche, na nhazi pụrụ iche nke igwe maka njikwa na arụmọrụ ka mma.
Ihe dị n'elu bụ nchịkọta nchịkọta akụkọ maka onye ọ bụla. Ụfọdụ njirimara nke ngwa nke ihe elekwasịrị anya na oghere elektrọnik. Dị ka ngwaahịa teknụzụ ọhụrụ, mpụta nke ihe ndị eburu n'uche bụ nnukwu ọganihu na teknụzụ ọgwụgwọ elu..
Prev: Uru nke cylindrical na planar magnetron sputtering zaa
Next: Mmepe nke elu-adị ọcha aluminum sputtering lekwasịrị ụlọ ọrụ